အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ PR စနစ်အတည်ပြုချက် ဆွေးနွေးချက်
အသံဖိုင် နားဆင်ရန် နဲ့ ရယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် အတွက် ကိုယ်စားလည်တွေ ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာ အချိုးကျမဲပေးစနစ်ကျင့်သုံးဖို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဒီကိစ္စကို အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလည် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်နဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကာလ ပုလဲမြို့မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလည် ဒေါက်တာတင့်ဆွေတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဦးခင်မောင်ညိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
PRစနစ်ဆွေးနွေးတဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ အစဉ်အလာ သမိုင်းကြောင်းကို မီးဖိုထဲမှာယောက်မကိုင်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတောင် သိနေပါလျှက် PRအဆိုရှင် လွှတ်တော် ကိုယ်စလှယ်နှစ်ယောက်တည်း ဆွေးနွေးတဲ့စကားဝိုင်းမှာ ဟုိုဆရာ ကြီးဘယ်သူဟူ၍ တစ်ခါမှ မကြားဖူးလေဟန်ပြောဆိုပုံ။ ဒေါ်စုနဲ့တပ်မတော်သား ယှဉ်ပြိုင်သမတရွေးရင် တပ်မတော်သားပဲမဲပေးမယ် တပ်မတော်သားမို့လို့စတဲ့စကားခွန်းတွေ ထွက်ခဲ့လေရာ ခံယူချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဘယ်လိုပြောပြော နားဆင်နေတဲ့ပြည်သူတွေက ဘာလဲဘယ်လဲဆိုတာ အကဲခပ်နေပါတယ် ။
Jun 29, 2014 12:16 PM
Daw Khin Waing Kyi didn't explain how much PR will have an impact on ethnic nationalities, you just covered your proposals on PR. I think you wanna be popular among rival parties and wanna win the votes; you rather not appreciate the wishes of the voters. Please be realistic at politics, but not ideological.
Jun 16, 2014 06:12 AM